Tesco 2 Ọkpụkpụ Salmon na-enweghị ntụpọ 260G | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Tesco 2 Boneless Salmon Fillets 260G– Ordrs
Tesco 2 Ọkpụkpụ Salmon Fillets 260G
Skin-na salmọn (Salmo salar) fillets.
Ejiri nlezianya ahọrọ maka ịdị ọcha na ọdịdị dị nro Na-akpali akpali. Na-akọ ugbo na mmiri n'akụkụ ụsọ oké osimiri Scotland. Azụ vasatail nke eji akpụkpọ ahụ mee maka ịdị mfe nke isi nri na inye ekpomeekpo zuru ezu.
Ejiri nlezianya họrọ maka ịdị ọcha na ọdịdị dị nro
Rụ ọrụ salmọn anyị dị ezigbo mkpa nye anyị nke mere ndị ọkachamara azụ azụ Tesco ji arụ ọrụ na ugbo na azụ azụ na-ejikwa ọrụ ha kpọrọ ihe iji na-emeziwanye ụkpụrụ ha dị elu nke ịdị mma, ọdịmma na nkwado.
Onsrụ ọrụ dị mkpa
Freshness & mma
Elu na omega 3
Ngwugwu ngwugwu: 260g